Amazon inopera kunze kweApple TV 4k maawa mushure mekuisa pakutengesa | Ndinobva mac
Amazon neApple vakagadzirisa. Munguva ya2017 zvakaziviswa kuti Amazon yaizotengesa zvakare Apple TV pane yayo yekutengesa chinhu webhusaiti. Nhaurirano hadzina kumira ipapo, nekuti kwemazuva mashoma tinogona kuona zvirimo Prime Video pane wechitatu uye wechina chizvarwa Apple TV, nekuda kweiyo ichangoburwa Amazon app paApple TV. Pane kudaro, chimwe chezviitiko hachina kuenda sezvanga zvichitarisirwa. Tiri kutaura nezve huwandu hweApple TV 3k iyo maAmazon aive nawo muchitoro chiri kutengeswa. Kana iwe ukaverenga nemazvo, zvaive, hazvo ivo vapera.
Haasi nyika dzese dzine Apple TV 4 iri kutengeswak pane peji reAmazon. Semuenzaniso, haina kuoneka pane iyo Spanish peji. Asi Kana iwe ukaenda kune yeInternet Amazon webhusaiti, meseji inotinyevera kuti chigadzirwa hachiwanikwe. Meseji inoratidza "yapera kupererwa".
Kuti tinzwisise, tinofanira kuona nyaya yacho nemaonero. Chishandiso chemultimedia ichi chinogashira zvakawanda zvirimo muUS kupfuura kune mamwe matunhu epasi. Chikamu chichangobva kuburitswa Rarama Mitambo, haisati yavapo munyika zhinji.
Kune rimwe divi, yakakwira muzana vashandisi veAmazon muUS vane kondirakiti Prime Video. Naizvozvo, aya maviri masevhisi matsva akatungamira mukuwedzera kutengesa uye kuwedzera kudiwa kweAmazon vhidhiyo sevhisi. Muchokwadi, anga ave mazuva kubva ipapo Apple yakazivisa kuti yakanga isina kuwanikwa kweiyo 64 Gb modhi yemamwe mavhiki 4-5.
Nezviito izvi, Apple neAmazon vakaona synergies dzinogona kuunzwa nechibvumirano chavo uye nemamirioni emadhora akarasika kubva muna Gumiguru 2015, pavakamira kunzwisisana pavakamira kutengesa Apple TV. Apple, pachayo chikamu, yakaratidza kuti pakanga pasina nzvimbo yeAmazon vhidhiyo sevhisi. Zvese izvi zvakagadziriswa riini chibvumirano chakaziviswa pagungano rekupedzisira rekuvandudza muna Chikumi apfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Amazon inomhanya kunze kweApple TV 4k maawa mushure mekuisa pakutengesa
Poland inonakidzwa neApple Pay pakutanga kwegore ra2018